ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသည် ဝယ်ယူသူ ဗဟိုပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုပါ။
၁။ vivo ဖုန်းဝယ်ယူပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိမိနှင့်နီးကပ်ရာ service center ကို သွားရောက်ပြီး အခမဲ့ပြုပြင်ခြင်း၊ အခမဲ့စက်သစ်လဲခြင်း၊ တစ်သက်သာ (၅)မျိုးအခမဲ့၊ ငွေပေးချဲ့လဲလှယ်ခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ခစားခွင့်ရှိပါသည်။ ( service center လိပ်စာကို vivo ဖုန်းအတွင်းတွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
settings > more settings > after-sales service )
၂။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသည် ပြင်ဆင်ရန် (ဗားရှင်းမြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်) လိုအပ်လာပါက သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အခြားအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များ အရန်သိမ်းဆည်းမှုပြုလုပ်ပြီး ဖျက်ပေးလိုက်ပါ။ ဆိုင်မှတစ်ဆင့်ပို့ဆောင်သောဟန်းစက်များသည် သင့်ကိုပြန်လည်ဆင်သွယ်နိုင်ရန် လက်ခံစာရွက်ကိုသေချာစွာဖြည့်စွပ်ပေးပါ။
၃။ စက်လာပြင်သည့်အချိန်တွင် မှန်ကန်သောဝယ်ယူမှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေနှင့်တကွ ဝယ်ယူသည့်ဘောင်ချာ မူရင်းများ ကျေးဇူးပြု၍ ယူဆောင်လာရမည်။ မှန်ကန်သောဝယ်ယူမှုနှင့် ဝယ်ယူသည့်ဘောင်ချာများသည် အရောင်းဆိုင်မှဖြည့်ပေးထားရမည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင်တံဆိပ်တုံး ထုနှိပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ရာများ/ဖျက်ရာများ မရှိရပါ။ အကယ်၍မှန်ကန်သောဝယ်ယူမှုသက်သေမပြသနိုင်လျှင် service center စစ်ဆေးမှုအဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အခြားသောအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဖုန်းပျက်စီးခြင်း(ဥပမာ- ဖုန်းအတွင်းသို့ ရေ/ရေငွေ့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးမပြုခြင်း)၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစက်ဖြုတ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ပြုပြင်ရေးဆိုင်များတွင် မပြင်ခြင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ အာမခံကာလ ကုန်သွားခြင်း စသည့်အခြေအနေများတွင် ကုမ္ပဏီက ပြင်ဆင်ခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ( ငွေကောက်ယူပါက vivo service center ၏ ဘောချာကိုအတည်ပြုပါ။)
၅။ ဝန်ဆောင်မှုအသေးစိတ်ကို အာမခံစာအုတ်ထဲသေချာဖတ်ရှု့ပါ။ စုံစမ်းအကြံပြုရန် Hotline 09-424257300
ရုံးချိန် - တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ မနက်၈:၃၀ မှ ညနေ၅:၃၀ထိ
အာမခံ အစားထိုးမှုနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း
၁။ စက်ကိရိယာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုခုရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ဆိုပါက မှန်ကန်သော ဝယ်ယူမှုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပြီး အာမခံ အစားထိုးခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။
၂။ စက်ကိရိယာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုအတွက် ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ ၁၅ ရက် အတွင်း စက်အခမဲ့အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အခမဲ့ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
ဘက်ထရီ၊ အားသွင်းခေါင်း၊ ဒေတာကြိုး၊ နားကြပ် နှင့် SD ကဒ် တို့သည် ဝယ်ယူသည့်နေ့ မှစ၍ ၆ လ အတွင်းအခမဲ့ ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
၃။ အခမဲ့ (၅)မျိ်ုး -
၁. တစ်သက်တာ အတွက် အခမဲ့ အာပ်ဂရိတ် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
၂. တစ်သက်တာ အတွက် အခမဲ့ ဖုန်းစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
၃. တစ်သက်တာ အတွက် အခမဲ့ ဖုန်းစစ်ဆေးပေးပါသည်။
၄. တစ်သက်တာ အတွက် အခမဲ့ ဖုန်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
၅. တစ်သက်တာ အတွက် အခမဲ့ အချို့သော ဆောဝ်၀ဲ ဒေါင်းလုဒ် ပေးပါသည်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး စုံစမ်းအကြံပြုခြင်း Hotline : 09-424257300